अब १५ मिनेटमै साटिने छ नयाँ नोट, कहाँ-कहाँ साट्न पाइन्छ हेर्नुहोस !::SamajikPatra
अब १५ मिनेटमै साटिने छ नयाँ नोट, कहाँ-कहाँ साट्न पाइन्छ हेर्नुहोस !
काठमाडौं । दशैंका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आजबाट नयाँ नोट वितरण शुरु गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सटही सुविधा असोज १० देखि १७ गतेसम्म उपलब्ध हुने जानकारी दिए । शुक्रबार दिउँसो काउन्टर बन्द गर्ने बेलासम्म ८ सय ५७ जनाले मात्रै नयाँ नोट सटही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निरौलाका अनुसार उपत्यकाभित्र विभिन्न बैंकमार्फत ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नोट सटही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपत्यका बाहिर भने राष्ट्र बैंकका कार्यालयबाट मात्रै त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्ला वर्षहरूमा थापाथलीस्थित कार्यालयबाट रकम वितरण गर्ने गरेको थियो । यसपटक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग नै बालुवाटारमा सरेकाले यहीँबाट सटही गरिएको छ ।
कहाँ कहाँ सटही ?
राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट सटही निकै सहज बनाइएको बताएको छ । उपत्यकाभित्र राष्ट्र बैंकका अतिरिक्त नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडका शाखाबाट पनि सेवाग्राहीले नयाँ नोट साट्न सक्छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिंहदरबार प्लाजास्थित केन्द्रीय कार्यालयसँगै सिंहदरबार परिसर, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानो थिमि, विशालबजार, नक्साल, बालाजु, लुभु र टोखा शाखाबाट पनि कार्यालयले आजैदेखि सेवाग्राहीलाई नयाँ नोट बाँड्न थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, कृषि विकास बैंकले उपत्यकाका ६ वटा शाखाबाट नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ । गौशाला, गठ्ठाघर, रामशाहपथ, रत्नपार्क, थानकोट र पुल्चोक शाखाबाट रकम वितरण हुने भएकाले ती स्थानबाट नोट सटही गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसका अतिरिक्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नयाँ नोट उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आफ्ना खाता भएका वित्तीय संस्थाबाट पनि सेवाग्राहीले नयाँ नोट साट्न सक्नेछन् ।
यसका साथै राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकासँगै अन्य जिल्लामा पनि नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था मिलाएको छ । यद्यपि, उपत्यकाको तुलनामा बाहिर निकै कम स्थानबाट रकम सटही गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, उसका विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी कार्यालयबाट उपत्यकामा जस्तै असोज १० देखि १७ गतेसम्म नयाँ नोट वितरण हुन्छ ।
आइतबारदेखि भने भीड बढ्न सक्ने प्रवक्ता निरौलाको अनुमान छ । ‘आज पहिलो दिन, त्यसमा पनि शुक्रबार भएकाले भिड कम भएको हुनसक्छ, आइतबार यो संख्या बढ्छ,’ विभागीय प्रमुख निरौलाले भने ।
जेल जानुहोला, होसियार रहनुस्
राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नोट सटहीको सीमा घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँसम्म नोट सटही गरेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले मात्रै साटिने बताएको छ ।
नयाँ नोट वितरण गर्ने योजना क्रमिक रुपमा घटाउदै जाने राष्ट्र बैंकको योजना छ । दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दा नोटको सुरक्षा नहुने भएका कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो योजना बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका विभागीय प्रमुख निरौलाले नोटमा केरमेट गरे वा क्षति पुर्‍याए ३ वर्षसम्म जेल जान सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ सचेत रहन समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, नोटको जतन गरौं, केरमेट गरे ३ महिना र जानीजानी नोटलाई नोक्सान पु¥याए ३ वर्षसम्म जेल जाने यहाँ लेखिएको छ’ देवानी संहिता देखाउदै उनले भने, ‘यसतर्फ सचेत रहन समैलाई आग्रह गर्छु ।’
उनले विशेष गरेर विद्यार्थीहरुले यस विषयमा ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् । कसैले जानीजानी नोटमा नोक्सानी पुर्याएको देखे नजिकैको प्रहरीलाई खबर गरिदिन समेत प्रवक्ता निरौलाले आग्रह गरेका छन् ।
चिनिया रास्ट्रपति सी को भ्रमणमा नेपालले यस्ता परियोजनाहरु पेस गर्दै !
लुटिएको रकम डेढ करोड हैन, ५० लाखमात्र: राष्‍ट्र बैंक
कृषि विकास बैंकबाट १ करोड ५६ लाख चोरियो